Usoro njikwa mma | Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd.
Anyị na-anwa ike anyị niile iji hụ na ngwaahịa dị mma yana ngwa ahịa dị egwu. Site na imewe, n'ichepụta, nchọpụta na njikwa, anyị na-eme njikwa ọkachamara na usoro ọ bụla na usoro ọ bụla dịka ISO9001: 2000 norms and standards.
Ogo ikike njikwa
Ruo ihe karịrị afọ iri, anyị na-elekwasị anya na mma. Anyị na-emejuputa njikwa mma dịka ụkpụrụ nke ISO13485 njikwa njikwa na GMP ngwaọrụ ahụike. Site akụrụngwa, na n'ichepụta usoro okokụre ngwongwo, àgwà na-nditịm-achịkwa ọ bụla usoro. Ndị ọrụ nyocha ọkachamara na ngwa nyocha zuru oke dị oke mkpa na njikwa njikwa a pụrụ ịdabere na ya, mana echiche nke ibu ọrụ sitere na ndị otu toro eto - onye na-echekwa ngwaahịa mma - dị mkpa karịa.
Usoro ikike ikike
Qualitydị mma sitere na arụmọrụ dị mma. Ike ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ chọrọ ọ bụghị naanị akụrụngwa dị elu, kamakwa usoro ịhazi yana arụ ọrụ tozuru etozu iji belata mgbanwe usoro yana jigide nkwụsi ike. Ndị ọrụ anyị a zụrụ nke ọma na-enyocha usoro nrụpụta na ogo ngwaahịa, na-eme mgbanwe n'oge n'oge dịka mgbanwe, ma na-eme ka nrụpụta dị mma.
Akụrụngwa, Cutter & Ngwa Control
Nkwalite akụrụngwa bụ ụzọ dị mkpa nke teknụzụ ọhụụ. Ngwaọrụ ọgbara ọhụrụ nke CNC emeela ka nrụpụta arụmọrụ ka mma, yana nke ka mkpa, ọ na-eweta mmụba geometric na nkenke nhazi. Ezi ịnyịnya kwesịrị ịnwe ezi ihe ịnyịnya. Anyị na-ejikarị ndị na-eme ihe eji eme ihe site na ụlọ na ndị mba ọzọ ndị debanyere aha na sistemụ ndị na-eweta ngwaahịa anyị mgbe nkwenye gasịrị. A na - azụta ndị na - egbu ihe site n'aka ndị nrụpụta akọwapụtara ma jiri n'okpuru iwu nke njikwa ndụ ọrụ, ngbanwe oge mbụ na mgbochi ọdịda iji hụ na ị na-ejizi nkenke na ịdị na-agbanwe agbanwe mgbe niile. Ọzọkwa, a na-etinye mmanụ ndị na-ete mmanụ na mmiri na mmiri mmiri iji mee ka arụmọrụ dịkwuo mma, belata mmetụta nsị na ihe, ma melite ogo ngwaahịa. Mmanụ ndị a na-ete mmanụ na mmiri mmiri na-enweghị mmetọ, dị mfe ihicha, na-enweghị ihe fọdụrụ.
Ezubere ngwaahịa anyị iji belata oge ọrụ, yana ogo ọkpụkpụ ọkpụkpụ tozuru oke ihe dịka 60% so na ndị kacha mma na China. Anyị raara onwe anyị nye imepụta na imepụta ngwaahịa anatomic ruo ihe karịrị afọ iri, a na-ekewa ngwaahịa na ụdị dị iche iche dịka ọnọdụ ọkpụkpụ nke ndị mmadụ na mpaghara dị iche iche. Ndị ọkachamara nwere ọtụtụ iri afọ nke ahụmịhe na-eduga usoro ahụ dum site na nchịkọta nhọrọ ngwá ọrụ, nhazi & nrụpụta iji gbakọta & ịtọ ntọala. A na-eji ngwa ọrụ ọ bụla mara ID nke kwekọrọ na ngwaahịa ụfọdụ, iji hụ na agbanwe agbanwe na nhazi ngwaahịa.